दिनमा तीन पटक कफी पिउनाले हाम्रो आयु कति लम्बिन सक्ने ? (थाहा पाउनुहोस्) « News24 : Premium News Channel
दिनमा तीन पटक कफी पिउनाले हाम्रो आयु कति लम्बिन सक्ने ? (थाहा पाउनुहोस्)
एजन्सी । हालै गरिएको एउटा अनुसन्धानले दिनमा तीनपल्ट कफी पिउनाले तपाईंको आयु लम्बिन सक्ने परिणाम देखाएको छ।
युरोपका १० देशका ३५ वर्ष माथिका करिब ५ लाख मानिसमा अनुसन्धान गरिएको थियो। ‘एनल्स अफ इन्टर्नल मेडिसिन’ जर्नलमा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानका अनुसार एक कप थप कफी पिउनाले कुनै पनि मानिसको आयु लम्बिन सक्छ, चाहे त्यो कफी ‘डिक्याफिनेटेड’कफीबाट क्याफिन निकालिएको नै किन नहोस्।
स्वस्थ व्यक्ति कफीप्रति धेरै आकर्षित भएको पनि हुनसक्छ, तर तपाईंलाई कफी पिउने बानी लाग्यो भने हानिकारक भने छैन। कफी अमृत नै नभए पनि तपाईं एकाबिहानै आरामसँग बसेर कफी पिउनुको आनन्द त लिन सक्नु हुन्छ नि होइन त१